I-Operation Pack, Kit Yokuhlinza, Iphakethe Lokugqoka - Zhancheng
Ukuhweba Co., Ltd.
Funda kabanzi mayelana ne-
IHENAN ZHANCHENG TRADING COMPANY yasungulwa ngonyaka we-2016 futhi itholakala eZhengzhou City, eSifundazweni saseHenan, isikhungo esikhulu se-eisai emhlabeni. Amafektri ethu ahola umkhiqizi ogxile kakhulu ocwaningweni, ekuthuthukisweni nasekukhiqizweni kokulahlwa kwezokwelapha okufana nezingubo zokuhlinza ezingezona ezelukiwe, ama-Drapes, amaKitshi wokuhlinza / amaphakethe, izipanji, ama-Gauzes, imikhiqizo ephezulu ye-Polymer, imikhiqizo ye-Anesthesia, njll.
Kwemboni yethu is ezikhethekile ucwaningo nentuthuko kanye nokukhiqizwa abakhiqizi yezokwelapha imikhiqizo alahlwayo.
Umshini Olahlwayo Wokuqoqa Igazi Isitsha
Alahlwayo Plastic Sample Cup
Imikhiqizo yekhwalithi, insizakalo esezingeni lokuqala
Ngokususelwa kumgomo othi "Ukwethembeka nokuthembeka, ikhwalithi yokuqala, ukuzuza ngokuhlanganyela kanye nenqubekela phambili ejwayelekile", sithole idumela elihle kubo bobabili abathengi basekhaya nabangaphandle.
ungafunda kabanzi ngathi lapha
IHENAN ZHANCHENG TRADING COMPANY yasungulwa ngonyaka we-2016 futhi itholakala eZhengzhou City, esifundazweni saseHenan ...
Izingubo zokusebenza ezingalukiwe, amashidi wokusebenza, izikhwama zokusebenza, izipanji, i-gauze, imikhiqizo ye-polymer, imikhiqizo ye-anesthesia, njll.
Imikhiqizo yethu ithengiswe ezifundazweni ezingaphezu kwezingu-30 eChina futhi zithunyelwa kwamanye amazwe amaningi emhlabeni ...
Ngokususelwa kumgomo othi "Ukwethembeka nokuthembeka, ikhwalithi yokuqala, ukuzuza ngokuhlanganyela kanye nenqubekela phambili ejwayelekile" ...
Lapho igciwane liqubuka ngo-2020, izinto ezilwa nobhubhane (izifihla-buso, izingubo zokuzivikela, njll.) Ezikhiqizwa inkampani yethu zathengiswa emakethe yaseYurophu ngentengo efanelekile futhi azange zenze nzuzo. Futhi yonke imikhiqizo ifanelekile, akukho zikhalazo.
Singumkhiqizo owaziwayo ongasetshenziswa wokukhiqiza nowokuthengisa eChina futhi sinohlelo oluphelele lokuphathwa kwekhwalithi nge-ISO9001, ISO13485 ne-CE certification.
Samukela ngokufudumele bonke abangane namakhasimende avela kuwo wonke umhlaba ukuthi asivakashele, futhi sibambisane ngobuqotho ukwakha ubuhlobo bethu bebhizinisi nobungane besikhathi eside.